ग्रीन टि पिउँदा स्लिम, तन्दुरुस्त र निरोगी भइन्छ ! कसरी ? «
ग्रीन टि पिउँदा स्लिम, तन्दुरुस्त र निरोगी भइन्छ ! कसरी ?
प्रकाशित मिति : ६ कार्तिक २०७५, मंगलवार ०४:२८
काठमाडौं । ग्रीन टिबारे अहिले धेरैलाई जानकारी भएपनि यसले कसरी काम गर्छ वा यसको प्रभाव के हुन्छ भन्नेबारे थाहा नहुन सक्छ । ग्रीन टि सामन्यत अन्य चिया जस्तै हो, खासगरी अर्थोडक्स चिया । हामीले दुधसँग सेवन गर्ने सिटिसी चिया (दानादार) भन्दा चाहि धेरै फरक हो ।
ग्रीन टि पहाडी क्षेत्रका चिया बगानको उत्पादन हुन्, जसलाई तयार गर्ने प्रक्रिया केही फरक हुन्छ । हरियो चिया पत्ती कारखानामा ल्याइसकेपछि त्यसलाई ओइलाउने, माड्ने र सुकाउने प्रक्रिया अरुभन्दा केही भिन्न हुन्छ । साथै, ग्रीन टि एउकै गुणस्तर, एकै स्वाद वा एकै रुपको पनि हुँदैन । थरीथरीका ग्रीन टि बन्छ । तर, ति सबैमा पाइने पोषक तत्वमा एकरुपता हुन्छ ।
ग्रीन मूलतः एन्टिअक्सिडेन्टको स्रोत हो, जो हाम्रो शरीरका लागि अति आवश्यक पोषक तत्वमा पर्छ । एन्टिअक्सिडेन्ट अन्य खानेकुरा पनि पाइन सकिन्छ, तर ग्रीन टि त्यसमध्ये उत्कृष्ट स्रोत हो ।
यसमा एपिगलोकेटेशिन-३ गलेट जस्ता तत्व हुन्छ, जसले शरीरमा क्यान्सरको कोशिका बढ्न दिदैन । अध्ययनहरुले भन्छ, ग्रीन टिको समूचित सेवनले क्यान्सरको जोखिम २५ प्रतिशतसम्म कम हुन्छ । यस्ता थुप्रै तत्वहरु हुन्छन्, जसले शरीरमा प्रत्यक्ष फाइदा गर्छ ।
जस्तो कि, ग्रीन टिले उच्च रक्तचाप, मधुमेह नियन्त्रणमा सघाउँ पुर्‍याउँछ । तर, यो उच्च रक्तचाप र मधुमेहको औषधी होइन, जो सेवन गर्नसाथ तुरुन्तै समस्या ठिक हुन्छ ।
त्यस्तै ग्रीन टिले कोलेस्टोर नियन्त्रण गर्छ, हड्डी बलियो बनाउँछ, छालामा चमक ल्याउँछ, शरीरको वोसोपन घटाउँछ । यावत् गुणहरुले गर्दा ग्रीन टिलाई गुणी पेय मानिन्छ ।
ग्रीन टि कुनैपनि रोग तत्काल निर्मूल बनाउने औषधी होइन । बरु यसको नियमित सेवनले ति रोगहरु लाग्ने संभावनालाई कम गर्छ । यसले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
ग्रीन टिले मोटोपन घटाउँछ, उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ, छालामा चमक ल्याउँछ । यी विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेका वैज्ञानिक आधार हुन् । तर, आज ग्रीन टि पिउन सुरु गर्‍यो, भोलि नै त्यसको नतिजा खोज्नु हुँदैन । किनभने ग्रीन टि भनेको आयुर्वेदिक महत्वको पेय हो, जसले प्राकृतिक रुपमा विस्तारै तर दीगो रुपमा हामीलाई रोगमुक्त गराउँछ ।
ग्रीन टि पिएर त्यसबाट लाभ लिनका लागि पिउने विधी, समय सबैकुरा थाहा हुनुपर्छ । जथाभावी सेवन गर्दा त्यसको प्रभावकारीता उस्तै रहँदैन । त्यसैले ग्रीन टि कसरी, कति र कुन समयमा पिउने भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
कसरी पिउने ग्रीन टि ?
बजारमा थरीथरीका ग्रीन टि पाइन्छ । अहिले धेरैजसो त टि ब्यागमा पनि उपलब्ध छन् । तर, ग्रीन टि खुला -टि ब्यागमा नराखिएको)बढी प्रभावकारी हुने बताइन्छ । त्यस्तै ग्रीन टि खरिद गरिरहँदा त्यो कुन बगान वा कुन स्थानको हो भनेर पनि जानकारी लिनुभयो भने राम्रो हुन्छ । किनभने यहाँ खपत हुने ग्रीन टि हाम्रै उत्पादन हुन् । खासगरी पूर्वी पहाडका थुप्रै जिल्लामा ग्रीन टि तयार हुन्छ । त्यसमध्ये पनि उच्च भेगको, अग्र्यानिक उत्पादन राम्रो हुन्छ ।
ग्रीन टिको बारेमा जानकारी लिइरहँदा त्यसको प्रयोग विधी जान्नैपर्छ । यदी सही ढंगले प्रयोग गरिएन भने साइड इफेक्ट पनि हुनसक्छ ।
१. ग्रीन टिलाई त्यसको भाँडो (ग्रीन टिकै लागि विशेष किसिमले तयार गरिएको)मा तयार गर्न सकिन्छ वा छुटै मग वा गिलासमा पनि तयार गर्न सकिन्छ । ग्रीन टि राखिसकेपछि त्यसमा तातो पानी हालेर उक्त पानी फ्याक्नुपर्छ । यसले गर्दा ग्रीन टिमा रहेका धुलो पखालिन्छ । त्यसपछि पुन तातो पानी राख्नुपर्छ ।
– ग्रीन टि ताजा पिउनुपर्छ । लामो समय राखेको ग्रीन टि पिउनु त्यती प्रभावकारी हुँदैन । लामो समयसम्म ग्रीन टि भिजाएर राख्दा त्यसमा रहेको भिटामिन र एन्टि अक्सिडेन्ट नष्ट हुन्छ । त्यही कारण यसको पुरा लाभ उठाउन सकिदैन ।
– विहान, बेलुकी, दिउसो जुनसुकै समयमा ग्रीन टि पिउन सकिन्छ । तर, विहान उठ्नसाथ खाली पेटमा ग्रीन टि पिउनु हुँदैन । खाना खानसाथ वा खाना खानुअघि पनि ग्रीन टि पिउनु त्यती राम्रो होइन । खाना खानुभन्दा अघि वा पछि आधा घण्टाको ग्याप राखेर पिउनुपर्छ ।
– विहान ब्रेकफास्टका साथमा ग्रीन टि पिउनु प्रभावकारी हुन्छ ।
– दिनमा तीन वा चार कप ग्रीन टि पिउनुपर्छ । त्यसभन्दा धेरै वा थोरै ग्रीन टि पिउनु उति प्रभावकारी मानिदैन ।
– अत्याधिक मात्रामा ग्रीन टि सेवन गर्दा त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट र फ्लवोनोइडस अधिक मात्रामा हुने भएकाले कलेजोमा असर गर्न सक्छ ।
– ग्रीन टिमा चिनी, दुध मिश्रण गर्नै हुँदैन । बरु महसँग मिश्रण गरेर सेवन गर्दा दोब्बर फाइदा हुन्छ ।
– ग्रीन टिमा मह मिसाएर सेवन गर्दा फ्याट बर्न एकदमै राम्ररी हुन्छ । यसले पाचन यन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ ।
– ग्रीन टि कुनैपनि औषधीसँग सेवन नगरौं ।
– न्युन रक्तचाप भएकाहरु, गर्भवती वा कुनै गंभिर शारीरिक समस्या झेलिरहेकाहरुले चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र ग्रीन टि सेवन गरौं ।